उत्तर कोरियासँग भिड्ने मनसायमा ट्रम्प ! ट्रम्प उत्तर कोरियाको सिमातर्फ प्रस्थान « Naya Bato
उत्तर कोरियासँग भिड्ने मनसायमा ट्रम्प ! ट्रम्प उत्तर कोरियाको सिमातर्फ प्रस्थान
वासिङटन, असोज २५ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प उत्तर कोरियासँगको जारी विवादमा ‘वार कि पार’ गर्ने मनसायमा देखिएका छन् । मंगलबार कोरियन प्रायद्वीपमा बमवर्षक विमानहरु उडाएको अमेरिका अब उत्तर कोरियालाई कस्तो जवाफ दिने भन्ने योजनामा व्यस्त भएको छ ।
अहिले ट्रम्प आफैं उत्तर कोरियाको भ्रमणमा जानसक्ने बताइएको छ । ट्रम्पले उत्तर कोरियाको विरुद्धमा कदम चाल्नका लागि सैन्य सल्लाहकारसँग भेटघाट गरेका छन् । यो बैठकमा पनि उत्तर कोरियामाथि अबको कारबाहीको विषयमा चर्चा भएको थियो ।
उत्तर कोरियाले गएको फेब्रुअरीदेखि अहिलेसम्म १५ परीक्षणबाट २२ मिसाइल फ्याँकिसकेको छ । सामाचार एजेन्सी द गार्जियनका अनुसार ट्रम्प छिटै नै एसियाको भ्रमण गर्दैछन्, यसै क्रममा उनी दक्षिण र उत्तर कोरियाको सीमानामा रहेको ‘डि मिलिटराइज जोन(डीएमजे)’ जानसक्नेछन् । यो क्षेत्रमा दक्षिण र उत्तर कोरियाले सबैभन्दा बढी आर्मी तैनाथ गरेको क्षेत्र हो । यो क्षेत्रको जाँच गर्नको लागि अमेरिकी अधिकारीहरु पछिल्लो केही महिनादेखि यो क्षेत्रमा रहेका छन् । उनीहरु ट्रम्पको भ्रमणको तयारी गरिरहेको हुनसक्ने बताइएको छ ।
ट्रम्पले उत्तर कोरियामाथि आफ्नो क्षमता देखाउने कोसिस गरेका छन् । मंगलबार बमवर्षक विमान कोरियामाथि उडाएर उनले उत्तर कोरियालाई जवाफ दिने प्रयास गरेका हुन् ।
दुई कोरियाबीचको डीएमजे क्षेत्र विश्वको सबैभन्दा खतरानक क्षेत्र हो साथै यो एक पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो । यो क्षेत्रबाट उत्तर कोरिया पनि देखिन्छ । यहाँबट फोटो खिच्ने अनुमति भए पनि कुनै सैनिकसँग बोल्ने अनुमति भने हुँदैन ।